Warbixin: Dib u dhaca kalfadhigii 26-aad ee baarlamaanka Puntland & baaqadashada M/weyne Faroole. – Radio Daljir
Juunyo 17, 2011 12:00 b 0
Garowe, June 17- Dib u dhac maalmo qaatay ayaa ku yimid imaanshihii m/weynaha dawladda Puntland iyo waftigii uu hoggaaminayey kaddib markii duullimaaddada dalka Jabbuuti uu saameyey fool-kaanihii ka dhacay waddanka Eretria.
M/weynaha Cabdiraxmaan Maxamed Faroole iyo waftigiisa oo hadda ku sugan jamhuuriyadda Jabbuuti ayaa la filayey in ay Puntland yimaadaan 14-kii bishan hase ahaatee safarkaasi waxaa hakiyey daruuro lixaadleh oo ka dhashay fool-kaane ka dhacay Eretria.
Inta badan duullimaaddadii u kala socon jiray waddamo badan oo bariga afrika ah ayaa la joojiyey cabsi laga qabay saamaynta daruurahaasi kacay ay ku yeelan karaan duulitaanka diyaaradaha gaar ahaanna aragtida xagga hawada oo qiiq badani uu daboolay.
Duullimaaddadii diyaaradaha ee waddamada bariga afrika ayaa la tilmaamayaa intoo badani in ay caadi ku soo laabteen hadda, marka laga reebo dalalka Eretria iyo Jabbuuti oo wali la tilmaamayo in ay hakad ku jiraan safarradii diyaaraduhu, taasoo sabab u noqday m/weyne Faroole iyo waftigiisu in ay ku sugnaadaan Jabbuuti.
Imaanshaha m/weynaha ee safarkiisaan uu ku maqnaa dibadda ayaa ahaa mid huwan xiiso gaar ah iyo xamaasad ka duwan safarradiisii hore ee uu ku aadi jiray bannaanka, waxaana aad loogu dhagtaagayaa mawqifka dawladda Puntland iyo halka ay ka taagan tahay qoddobadkii ka soo baxay shirkii waddanka Yugaandha taasoo la filayey m/weynuhu in uu faahfaahiyo imaanshihiisa kaddib, walina ma cadda xilliga rasmiga ah ee waftiga m/weynuhu u soo jahaysan doonaan Puntland.
Wasiirka duuliska hawada iyo garoomada Puntland Cali Axmed Gammuute oo u warramay Daljir ayaa sheegay daruuraha ka curtay Fool-kaanihii Eretria in aysan wax saamayn ah habayaraatee ku yeelan hawada Puntland iyo duullimaaddadii imaan jiray marka laga reebo kuwii Jabbuuti, waxaana uu sheegay baaqashada m/weynaha iyo waftigiisu in ay salka ku hayso daruuro iyo qiiq dul-heehaabaya hawada waddanka Jabbuuti.
Dhinaca kalena dib u dhaca ku yimid imaansha m/weynaha waxay iyana dib u ridday furitaankii kalfadhigii 26-aad ee golaha baarlamaanka Puntland kaasoo la filayey in uu furmo 15-kii bishan June sida ku cad xeer-hoosaad golaha.
Kalfadhiga golaha oo ah mid sharci ah sannadkiina labo jeer furma ayaa ka dib uga dhacay wakhtigii lagu yaqaannay ee 15-ka bisha June sababo lagu micneeyey maqnaanta m/weynaha iyadoo uusan jirin wakhti loo cayimay iyo maalin loo asteeyey in uu furmo toona.
Qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiillada Puntland ayaa qaba dib u dhigga lagu sameeyey wakhtigii furitaanka kalfadhiga golaha in ay tahay mid aan sharciga ku bannaanayn, wiiqid waaxyo goynna ku ah xeerka xildhibaannadu ku adeegaan, halka kuwo kalena ay qabaan in uusan jirin wax sharci ah oo buray dastuurkuna uu fasaxayo maalinkasta oo ka mid ah bishaan June in uu furmo kalfadhiga baarlamaanku.
Halkaan ka dhagayso war-bixin iftiiminaysa sababka baaqashada safarkii m/weyne Faroole iyo dib u dhaca furmidda fadhigii 26-aad ee baarlamaanka Puntland.